Dhageyso:- Faah-faahin Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac – Kismaayo24 News Agency
Dhageyso:- Faah-faahin Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac
by admin 5th November 2019 068
Maamulka gobolka Barri iyo taliska qeybta gobolkaas ayaa ka warbixiyay Shil gaari oo ka dhacay wadada xiriirisa Boosaaso iyo Gaalkacyo iyagoona dad weynaha ku wargaliyay in wadada ay go’antahay oo laxiray kadib shilkaas markuu ka dhacay.
Taliyaha qeybta Booliiska gobolka Barri G/sarre Xuseen Cali Maxamuud oo kormeeray wadadaas uu shilka ka dhacay ayaa warbaahinta ooga warbixiyay shilka iyo khasaaraha ka dhashay oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho wuxuuna taliyaha sheegay in 1 qof uu ku dhintay shilka sidoo kalena 4 qof ay ku dhaawacmeen.
Shilka gaariga ayaa yimid kadib markii mid kamida gaadiidka uu ku sariiteeyay (Sabiibaxday) meel biyo mareen ah,wadada xiriirisa magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo ayaa marar badan waxaa ka dhaca shilal gaadiid iyadoona shilalkaas xilliga ugu badan ay dhacaan marka uu roob da’o.
Dawwo:- Puntland oo si kulul ooga hadashay barnaamij ka baxay mid kamida tv-yada Soomalida.
DHAGAYSO:- Madaxweynaha Putland Oo Sheegay in Maamulkiisu Isku Filanyahay.
Ahmed sudani 6th May 2018
Madaxweynihii xilka laga qaaday ee hirshabelle oo ku goodiyay in uu kusii shaqeyn doono beledweyne
Tifaftiraha K24 29th August 2017
TOP NEWS: Dagaalo u dhaxeeya Alshabaab iyo Ciidamada Kenya oo garabsanay kuwa Mareykan ah oo shalay iyo Maanta ka dhacay Duleedka Kismaayo
Tifaftiraha K24 7th January 2017